talaabooyin fudud inuu ka soo kabsado card SD formatted
About card SD formatted
Card SD yihiin baabuurta xasuusta hooseeyo oo jilicsan oo la hubiyo in xogta ee user weli hal meel iyo kaydinta jirka sidoo kale ma aha waaweyn oo dhan. Card SD formatted loola jeedaa kaydinta ah oo uu soo tirtirayaa si loo heli karo. Waxaa caadi ah in qaab kaararka SD gaar ahaan marka ay ku kharribeen ama noqon non functional.
Ma xogta lumay recoverable ka kaarka formatted?
Waxaa jira tobanaan kun oo barnaamijyo lagu rakibo ayaa laga yaabaa in la hubiyo in xogta ka kaarka SD formatted aan la soo kabsaday oo kaliya laakiin user ayaa sidoo kale ka arki kartaa files joogay oo waxaad ka samaysaa kabashada sida doorashada. Sidaa darteed jawaabta su'aasha sakhiray waa shaki la'aan haa laakiin kaliya markii mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo la isticmaalo si loo hubiyo in xogta s kabsaday kasta oo dib u dhac dheeraad ah oo aan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in wareejinta xogta ama soo kabashada waa in la sameeya barnaamij ka dhan ah qaababka sida loo isticmaali karo si loo hubiyo in barnaamijka ka shaqeeya hab cabsi badan sameeyaan. Waxaa sidoo kale in la xusay waa in barnaamijyada soo kabashada card SD loo isticmaali hayo maanka awoodda kabashada guud oo ka shaqeeya cadaadis sida inta badan ay burburtay barnaamijyada software soo kabashada marka nidaamka kaash load iyaga on Sidaa darteed ugu wanaagsan waa in la doortay si ay u sameeyaan hubiso in natiijada ugu wanaagsan laga helo iyo haddii aan la samayn markaas user waa in aan marnaba filan xogta lumay la soo kabsaday lahaa. Qaybta dambe ee tutorial this sidoo kale hubin doona in user helo hordhac ah mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyey. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in habka ah in la soo sheegnay doonaa lagu dabaqo aan gefo talaabo kasta oo keliya si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa taas oo shaki keeni lahaa user ee ku wajahan dib u soo kabashada ee xogta on a card SD formatted ama wax kasta oo xaaladda malaha.
Ceshano xogta ka card SD ee 3 talaabooyin fudud
Kaqabashada xogta ka card SD ayaa marna si fudud hor inta uusan barnaamijka Wondershare Data Recovery la bilaabay. Is The keenaysay iyo barnaamijka casri ah inuu xaqiijiyo in sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka waxaa lagu helaa dib u dhac kasta oo aan user iyo sidoo kale helo caawin ah ka raysashada xogta aan wax arrintan iyo dhibaato. The Wondershare kooxda horumarinta weliba hubinayaa in uu ugu fiican oo gobolka ka mid ah geeddi-tahay waa la qaatay, halka la xariirta barnaamijka si uu noqdo doorasho ee Zaman kasta oo aan marnaba la noqdo dhacsan sida ugu barnaamijyada soo kabashada sameeyo. Wondershare Data Recovery Waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in user helo ugu fiican iyo natiijooyinka ugu horumarsan oo aan dib u dhac ah oo labaad oo hal sabab la mid ah waxaa sidoo kale in la xusay in user ka heli kartaa ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaatada waa . Geedi socodka waa in la socotid barnaamijka ayaa lagu sharaxayaa sida hoos ku qoran:
1. user wuxuu u baahan yahay inay isticmaalaan URL http://www.wondershare.com/data-recovery/guide.html si loo hubiyo in version maxkamad barnaamijka la soo bixi, rakibay oo bilaabay gal nidaamka:
2. Marka barnaamijka oo bilaabay garaacid button soo socda waxay keeni doonaa user dhinaca suuqa kala kale in la hubiyo in nooca file waa in uu noqon heli la doorto si barnaamijka uu u muuqdo mid kaliya ee noocaas ah ee files kaliya iyo habka uu noqonayaa dhakhso dhigi lahaa:
3. goobta file waa in markaas la cayimay si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo oo mar kale barnaamijka fiiriya meesha ku cad si loo hubiyo in arrinta la xalin iyo habka uu noqonayaa deg deg ah:
4. user ayaa tallaabadii u dambaysay u baahan yahay in la hubiyo in faylasha lagu soo kabsaday sawirka kadib waxaa loo arki si dhow iyo kuwa baahan yahay user ayaa lagu eegaa iyo badhanka soo kabsado dhufto si loo hubiyo in nidaamka la dhammeeyo:
Taageerayaan noocyada card SD ee barnaamijkan
Barnaamijka software Taas ayaa ka dhigaysa hubiyo in dhammaan noocyada card SD waxaa taageera oo ka mid ah kaarka XD ah, kaarka SDXC, kaarka SD micro iyo liiska iyo tagaa. Waa shaqo adag iyo waxtarka kooxda ee Wondershare horumarinta oo ay hubiyaan in qaab kaarka badan oo aan la taageeray oo kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka ee la xiriirta barnaamijkan.
Sidee si ay u helaan kaarka SD oo aan formatting?
Sida kaliya ee ugu fiican iyo in la hubiyo in wixii kaloo ah waa cawl waxaa ay hubiyaan in software soo kabashada waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira in aan kaliya u hesho natiijooyinka ugu fiican, laakiin waxa kale oo hubin doona in ay ka kooban card waxaa marna ayaan. Inta badan dadka isticmaala ay yihiin aragtida ah in kaarka SD u kharribmay oo macnaheedu yahay in macluumaadka la wada badiyay laakiin run ahaantii ma aha in kiiska iyo xogta waa hubaal recoverable haddii ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa loo isticmaalaa in arrintan la xiriira . Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in barnaamijka in loo doortay in arrintan la xiriira ma aha oo kaliya helo natiijada ugu wanaagsan sameeyo, laakiin sidoo kale wuxuu hubiyaa in barnaamijka uu yahay mid wax ku ool ah baadhitaanka files iyo noocyada qaab kale oo ay taageerayaan in user rabitaan. Wondershare Data Recovery Ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay in arrintan la xiriira, waxaana uu marna soo dhibtay oo la xiriirta soo kabashada kaadhka xusuusta. Kaarka SD kharribeen Sidaa darteed waa recoverable iyadoo la adeegsanayo barnaamijka ugu fiican oo sidaas daraaddeed waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badan.
> Resource > Ladnaansho > 3 talaabooyin fudud inuu ka soo kabsado card SD formatted